जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरमा गठबन्धनबाट एकल उम्मेदवारी- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरमा गठबन्धनबाट एकल उम्मेदवारी
पाँचथर — जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनका उम्मेदवारहरुको मात्रै मनोनयन दर्ता भएको छ ।
जेठ २३ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रमुख पदमा कांग्रेसका रामराज आङ्देम्बे, उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका यामकुमार आङ्बोको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो । यस्तै ७ जना सदस्यका लागि पनि गठबन्धन तर्फबाटै एकल उम्मेदवारी परेको हो ।
गठबन्धनबीच भागबन्डा गर्दा कांग्रेसले समन्वय प्रमुख र तीन जना सदस्य, माओवादी केन्द्रले उपप्रमुखसहित तीनजना सदस्य र एकीकृत समाजवादीले एक जना सदस्य लिएका छन् । समन्वय समितिको सदस्य पदमा डिलेन्द्र सेर्मा, टेकराज योङहाङ, हिमओती जबेगु, रिना गुरुङ, मणिकुमार थाम्सुहाङ, अमृत राई बान्तावा र लेन्जो थाम्सुहाङको उम्मेदवारी परेको छ ।
सबै पदमा एक/एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले उनीहरुविरुद्ध दाबी/विरोध नपरे निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार उम्मेदवारविरुद्ध दाबी/विरोधका लागि जेठ २२ गतेका लागि तोकिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७९ २०:५६
क्यान्सरमुक्त शुभेच्छाको अनुभव- ‘क्यान्सर, खानपान र म’
काठमाडौँ — सन् २०१६ तिर शुभेच्छा घिमिरेले नुहाउने क्रममा स्तनमा केही फरकपन जस्तो पाइन् । त्यसपछि जाँच गराउँदा दोस्रो स्टेजको स्तन क्यान्सर भइसकेको रहेछ । त्यसबेला उनी ३२ वर्षको थिइन् ।
६ वर्षअघिको त्यो क्षण सम्झँदै भन्छिन्, ‘साढे १ वर्ष उपचारमै बित्यो । शारीरिक रुपमा ठीक भए पनि मानसिक रुपमा ठीक हुन २–३ वर्ष नै लाग्यो । ठीक भएपछि यसको बारेमा बोल्नुपर्छ, जनचेतना फैलाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । आफ्नो रोगबारे बताउन र डाक्टरको पहुचँसम्म पुग्न धेरै गाह्रो मान्ने छन् । सचेतना होस् भन्ने उद्देश्यले पुस्तक लेख्ने आँट गरें ।’
क्यान्सरमुक्त बनेपछिको अनुभव समेटिएको शुभेच्छा घिमिरेको पुस्तक नेपाली अनुवाद ‘क्यान्सर, खानपान र म’ शुक्रबार राजधानीको एक कार्यक्रमबीच चलचित्र निर्देशक तथा लेखक यादव खरेल, अनुवादक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेश पौडेल, जनस्वास्थ्यविद डा. अरुणा उप्रेती, श्वर–सरा घिमिरे प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष प्रजिता कार्की तथा लेखक शुभेच्छा घिमिरेले विमोचन गरेका थिए ।
जनस्वास्थ्यविद तथा पुस्तककी अनुवाद सहयोगी डा. अरुणा उप्रेतीले लेखकले आफूले मात्र नयाँ जीवन नपाएको बरु नयाँ मान्छेलाई पनि जीवन दिएको बताइन् । डा उप्रेतीले भनिन्, ‘क्यान्सर जितिसकेपछि सन्तान जन्माइन् । नेपालमा धेरै महिलाहरु स्तन तथा पाठेघर क्यान्सरबाट पीडित छन् । थुप्रै महिलाहरु उपचारको दायरामा आउन सकेका छैनन् । शुभेच्छा बाँच्ने जीजीविषाले यहाँसम्म आइपुगेकी छन् । उनका श्रीमान जस्तै सबै पुरुषहरु सहयोगी हुनुपर्छ ।’
शुभेच्छाले दाहिने भागको स्तन प्रत्यारोपण गराएकी छन् । छोरी जन्मेपछि स्तनपान गराउँदाको अनुभव र आफ्नो नयाँ स्तन शरीरलाई स्वीकार्न कति समय लागेको थियो भन्नेबारे लेखक शुभेच्छाले बताइन् । लेखक घिमिरे भन्छिन्, ‘आफ्नै शरीर हो कि होइन भनेर धेरै पछि स्वीकारेँ । कहिलेकाहीँ आफ्नै शरीर हेरेर झसंग जस्तो हुन्छु तर जति समय बित्दै जान्छ सम्झना रहन्छ तर दु:ख हराउने रहेछ ।’
घिमिरेद्वारा अंग्रेजी भाषामा सन् २०२० मा लेखिएको ‘क्यान्सर, करी एन्ड मी’को नेपाली अनुवाद महेश पौड्यालाले गरेका हुन् भने सम्पादन संयोजन डा अरुणा उप्रेती र युवराज नयाँघरेले गरेका हुन् । पुस्तकलाई तीन खण्डबाट पढ्न सहज हुन्छ । खण्ड १ मा लेखकले आफ्नो क्यान्सर यात्राको बारेमा लेखिकी छन् भने दोस्रो खण्डमा नेपाली भान्सामा पाइने जडिबुटी र त्यसले आफ्नो स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावका बारेमा समेटेकी छन् । त्यसैगरी तेस्रो खण्डमा आफू निको भइसकेपछिको जीवनशैली र सचेतनामूलक कुराहरु समेटेकी छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७९ २०:५५